TechSectors: How to
Features and benefits of Windows 10 Enterprise LTSC
သူများတကာတွေ Windows 10 သုံးနေကြတာတွေ့လို့ ကိုယ့် ကွန်ပျူတာကိုလည်း Windows 10 ပြောင်းသုံး ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီး တွေးနေမိသလား။
Windows 10 ကိုသုံးချင်ပေမယ့် တကယ်တမ်း အသုံးချရမယ့်အချိန်မှာ စက်ရဲ့ Hardware Requirements က နိမ့်လို့ Performance မကောင်းမှာမျိုး စိုးရိမ်နေသလား။
လက်ရှိ Windows 10 သုံးနေပေမယ့် အရင်သုံးခဲ့ဖူးတဲ့ Windows (Windows 8.1, 8, 7) တွေလို သွက်သွက် လက်လက်မရှိဘဲ နှေးကွေးလေးလံနေတယ်လို့ ခံစားနေရသလား။
ကိုယ်လည်း အမှန်တကယ်သုံးဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲ မလိုဘဲထည့်ထားတဲ့ Applications တွေ Windows 10 မှာ ပိုများနေတယ်လို့ ခံစားနေရသလား။
သုံးချင်တာက Windows 10 Pro - ဒါပေမယ့် စက်ရဲ့ Performance မနိုင်မနင်းဖြစ်မှာစိုးလို့ Windows 10 Home/Basic လောက်ကိုဆင်းပြီး အဝေးတစ်နေရာကနေ Pro Features တွေ ငါ့စက်က ဘယ်တော့မှ သုံးနိုင်မှာပါလိမ့်လို့ ကျိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေသလား။
ကွန်ပျူတာနဲ့ ရင်းနှီးသူအများစု ခုနောက်ပိုင်းမှာ Windows 10 ကို ရင်းနှီးနေကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံက ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူအများစုရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ Windows 10 ကို Windows7နဲ့ Windows 8.1 တို့လောက် ကျေနပ်မှု မရနိုင်ကြသေးဘူးလို့ ယူဆရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် မြန်မာဖောင့်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တချို့ သော အဆင်မပြေကြသူ အများစုက Negative Feedback ပေးကြတာ၊ Microsoft ကနေ ထုတ်တဲ့ နောက်ဆုံး OS ဖြစ်တာကြောင့် Hardware Requirements တောင်းတာ များလာတာ၊ Graphic Cards ကောင်းကောင်း ကန်းကန်းမပါရင် သုံးဖို့အဆင်မပြေတာ၊ လက်ရှိရင်းနှီးပြီးသား Interface တစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုကို ပြောင်းလဲ ဖို့ စိန်ခေါ်မှုကို ရင်မဆိုင်ချင်တာ အစရှိသဖြင့် အ​ခြေအနေအမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း Windows 10 ကို စထွက်စဉ်ကတည်းက တစိုက်မတ်မတ် သုံးချင်ခဲ့ပေမယ့် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေကြောင့် Windows 10 သုံးနေရာကနေ မကြာခဏ Windows 8.1 ကို ပြန်ဆင်းဆင်းပြီး သုံးခဲ့ရပါတယ်။ Windows 10 သုံးချိန်မှာ ကျွန်တော့်အတွက် အဓိက အဆင်မပြေတဲ့ ပြဿနာကတော့ Graphics ပြဿနာပါ။ ပုံမှန်အမြဲသုံးနေရတဲ့ AutoCAD, Sketchup, Solidworks, Siemens NX တွေဆိုရင် Windows 10 Pro နဲ့ တွဲသုံးချိန်မှာ Graphics မနိုင်မနင်းဖြစ်ပြီး အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်မပြေ ဖြစ်ရပါတယ်။ Office ဆိုရင်လည်း 2016, 2019 သုံးရင် ကျွန်တော့်စက်က Hang ပါတယ်။ Windows 10 Pro ကို မနိုင်လို့ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး Windows 10 Home အထိ ဆင်းသုံးဖူးပါတယ်။ အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။
နောက်ဆုံးမှာ ကျွန်တော် အဖြေတစ်ခု ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့အတွက်လည်း ဒီအကြောင်းကို ရေးဖြစ်တာပါ။ Windows 10 သုံးပေမယ့် ကျွန်တော့်လို စိတ်တိုင်းမကျ ဖြစ်နေသူတွေ၊ အပေါ်ဆုံးမှာ မေးခဲ့တဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီနေသူတွေ ဒီနည်းကို စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Windows 10 အစား Windows 10 Enterprise LTSC Version (Long-Term Servicing Channel) ကို ပြောင်းသုံးကြည့်ပါ။
Windows 10 Enterprise LTSC version ဆိုတာ တော်တော်များများ မကြားဖူး မရင်းနှီးကြပါဘူး။ အများစုက Windows 10 Pro/Enterprise လောက်ကိုပဲ အသုံးများပြီး ကြားဖူးကြပါတယ်။ ပုံမှန်လူသုံးများတဲ့ Windows 10 Pro/Enterprise တွေမှာ တကယ်တော့ လူကြိုက်သိပ်မများတဲ့ (လူသိပ်မသုံးတဲ့) Built-in Apps တွေ (ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် Stores, Edge browser, Maps, Cortana, .) စတဲ့ Metro Apps တွေ၊ Games တွေ အတော်များများ ပါဝင်နေပါတယ်။ အဲ့တာတွေအပြင် ဘာမှမပြုမပြင်ပဲ ဆိုင်ကတင်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်း သုံးတဲ့ အခါ Background Processes အရမ်းများပြီး System Resources အတော်ပေးရသလို၊ ပုံမှန်အများစု သိပ်သတိမထားမိကြဘဲ နေရာပေးထားရတဲ့ Apps တွေလည်း Windows 10 မှာ တော်တော်များများ ပါဝင်နေပါတယ်။ အဲ့ Apps တွေထဲက တချို့ကို အလွယ်တကူ ဖြုတ်ပစ်လို့ရပေမယ့် တချို့ကတော့ ဖြုတ်ပစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။
အဆိုးဆုံးပြဿနာကတော့ အင်တာနက်ချိတ်ပြီး သုံးလေ့ရှိတဲ့ စက်တွေမှာ Windows 10 တင်ထားရင် User ဆီကနေ ခွင့်ပြုချက်မတောင်းဘဲ သူ့ဘာသာ မကြာခဏ Updates တွေ ဒေါင်းလုပ်ချပြီး နောက်ကွယ်ကနေ Install လုပ်နေတဲ့ ပြဿနာပါ။ Windows 10 ကို လူမုန်းများကြတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ Windows Updates ကို ပိတ်ဖို့မလွယ်တဲ့အချက်ကလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ Windows 10 မှာ စထွက်ကတည်းကနေ လက်ရှိအချိန်ထိ ထုတ်ထားပြီးတဲ့ Updates တွေက အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်-
Windows 10 November Update (version 1511) (codename Threshold2or TH2)
Windows 10 Anniversary Update (version 1607) (codename Redstone 1 or RS1)
Windows 10 Creators Update (version 1703) (codename Redstone2or RS2)
Windows 10 Fall Creators Update (version 1709) (codename Redstone3or RS3)
Windows 10 April 2018 Update (version 1803) (codename Redstone4or RS4)
Windows 10 October 2018 Update (version 1809) (codename Redstone5or RS5)
အဲ့တာကြောင့် Windows 10 ချင်းတူပေမယ့် ကိုယ့်စက်မှာ တင်ထားတဲ့ Windows 10 ဟာ ထိပ်ဆုံးက Version 1511 များ ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံး Version 1809 ဒေါင်းလုပ်ချပြီး Install လုပ်လို့မပြီးမချင်းနောက်ကွယ် ကနေ ဒီ Windows Updates က Run နေမှာပါ။ Windows 10 Automatic Updates ကို ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းတချို့ ရှိသလို ခုနောက်ထွက်မယ့် Windows 10 May 2019 Update မှာလည်း အဲ့ဒီ့ချို့ယွင်းချက်ကို ပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ Microsoft က ဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ့အခြေအနေကို မရောက်လာမချင်း End Users တွေအတွက်တော့ Windows Updates နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ရှုပ်စရာတွေ ရှိနေရဦးမှာပါ။
What is Windows 10 Enterprise LTSC Version?
Windows 10 Enterprise LTSC ဆိုတာ အကြီးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ အလယ်အလတ်တန်းစား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုကြတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေအတွက် New Features တွေကို ဦးစားမပေးဘဲ Stable ဖြစ်ဖို့ ဦးစားပေး ဖန်တီးထားတဲ့ Enterprise Version တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အားသာချက်တွေ ကတော့-
မဖြစ်မနေလိုတဲ့ Security Updates အနည်းအကျဉ်း Install လုပ်တာကလွဲရင် ပုံမှန် Windows 10 တွေမှာလို Updates ပြဿနာလုံးဝမရှိဘဲ Long-term support ပေးပါတယ်။
၂ နှစ် သို့မဟုတ် ၃ နှစ်ခြားမှ တစ်ခါသာ Major Release ထွက်ပြီး ထွက်တဲ့ Release တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကလည်း Security Updates ကို ၁၀ နှစ်ထိ ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။
Windows 10 Enterprise LTSC မှာ အများစု မကြိုက်(မသုံးဖြစ်ကြတဲ့) Store Apps တွေ၊ Edge Browser၊ Cortana စတာတွေ မပါသလို Windows Store ကိုပါ ထည့်မထားပါဘူး။
အသုံးပြုသူရဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းတဲ့ Telemetry နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ Services တွေကိုလည်း Windows 10 Enterprise LTSC မှာ အားလုံးနီးပါး အပြီးပိတ်ထားလို့ရပါတယ်။
မလိုလားတဲ့ Apps တွေနည်းတဲ့အတွက်တော့ System Resources အသုံးပြုမှုလည်းနည်းပြီး ပုံမှန် Hardware Requirements နိမ့်တဲ့ စက်တွေမှာတောင် Windows 10 ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သုံးနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။
Updates တွေ ခဏခဏ ဒေါင်းလုပ်ချပြီး Install လုပ်နေတာမျိုး မရှိလို့ System က Stable ဖြစ်ပြီး Performance လည်း အတော်လေး ကောင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး အချက်တစ်ခုကတော့ Graphics သုံးရတဲ့ Apps တွေကို တခြား Windows 10 တွေနဲ့ မတူပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သုံးနိုင်တဲ့အချက်ပါ။
အဲ့တာတွေကြောင့်မို့ Stable ဖြစ်တဲ့ Windows 10 ကို ပေ့ါပေါ့ပါးပါး သုံးချင်သူတွေအတွက် တခြားတခြားသော Windows 10 Versions တွေထက် Windows 10 Enterprise LTSC ကို ပြောင်းသုံးဖို့ ကျွန်တော် အကြံ ပေးချင်ပါတယ်။ တစ်ခုသိထားဖို့လိုတာ Windows 10 Enterprise LTSC သည် ပုံမှန် Windows Users တွေအတွက် တရားဝင်ရောင်းတဲ့ OS မဟုတ်လို့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ Computer ခွေအရောင်းဆိုင်တွေမှာ ရနိုင်ဖို့ မသေချာပါဘူး။ Windows 10 Enterprise LTSC ဆိုတာကို သိချင်မှတောင် သိပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို Windows 10 Enterprise LTSC ကို ဘယ်မှာရှာလို့ရနိုင်မလဲ။
ဟုတ်ကဲ့။ အင်တာနက်ရှိရင် အလွယ်တကူ ဒေါင်းလုပ်ချလို့ရတဲ့ နေရာတွေရှိပါတယ်။ ခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Windows 10 Enterprise LTSC 2019 Build 17763.437 (Updated Apr. 2019) x86 / x64 ဆိုရင် ဒီနေရာမှာ တွေ့မိပါတယ်။
ဒီလိုတွေပြောခဲ့လို့ Windows 10 Enterprise LTSC က အားနည်းချက်တွေ မရှိတော့ဘူးလား …
ဒီလိုတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး သူ့မှာလည်း စဉ်းစားစရာလေးတွေ တော့ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါတွေပြောနေရင် ရှည်ကုန်မှာစိုးလို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ နားလိုက်ပါဦးမယ်။
6:38 PM LeaveaComment Read More
7:34 PM LeaveaComment Read More
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူ အများစု Windows 10 ကို ဦးစားပေး သုံးလာကြတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း လက်ရှိ Windows 10 ပဲ သုံးပါတယ်။ Windows 10 သုံးခဲ့တာ ကြာခဲ့ပြီမို့လို့ သူ့ရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက် တော်တော်များများကိုလည်း ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တီးမိခေါက်မိရှိပါတယ်။ ခုလက်တလော ကျွန်တော် ပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုက Windows 10 x64 bit သုံးကြသူအများစု မကြာခဏကြုံနေရတဲ့ မြန်မာစာ၊ မြန်မာဖောင့် အဆင်မပြေတဲ့ ပြဿနာအကြောင်းပါ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဖြေရှင်းနည်း သိခဲ့ပြီမို့လို့ ခုချိန်မှာ အခက်အခဲသိပ်မရှိတော့ပါဘူး။ Windows 10 x64 bit မှာ မြန်မာလို အဆင်ပြေပြေ စာရိုက်ချင်တယ် ဆိုရင် တခြား Installer တွေ မေ့လိုက်ပါ။ လက်ရှိအချိန်ထိ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ KeyMagic Keyboard ကို သုံးပါ။
Office 2010, 2013, 2016 မှာ စာရိုက်ရင် ဘာမှမပေါ်ဘူး ဒါမှမဟုတ် လေးဒေါင့်တုံးတွေပဲ ပေါ်တယ်ဆိုသူတွေ http://www.unicode.today/ မှာ Office အမျိုးအစားအလိုက် ပေးထားတဲ့ ဖောင့်ကို အသေအချာရွေး၊ ဒေါင်းလုပ်ချပြီး Install လုပ်ပါ။ ပြီးရင် အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ KeyMagic Keyboard ကို သုံးပါ။ ဒါဆို ဖြေရှင်းပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Office 2010, 2013, 2016 မှာ စာရိုက်ရင် ဝလုံးလို အစက်တွေနဲ့ အဝိုင်းတွေပဲ ပေါ်တယ်ဆိုသူတွေ များသောသဖြင့် အဲ့လိုပြဿနာက Office x64 bit Versions တွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ OpenType Features ကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ အပေါ်မှာရေးထားတဲ့ ပထမနည်းနဲ့ မပြေလည်ရင် OpenType Features ​အောက်က Ligatures မှာ All ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ် လုပ်ဆောင်ပုံကို ဒီနေရာမှာဖတ်ကြည့်ပါ။
Office မှာ စာရိုက်ရင် တချို့စာတွေကို Zawgyi-One နဲ့ရိုက်ပြီး တချို့စာတွေကို Unicode နဲ့ ရိုက်ချင် သူတွေအတွက်လည်း အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ KeyMagic Keyboard ကိုပဲ သုံးပါ။ Ctrl+Shift အတွဲကို အချိန်းအပြောင်းလုပ်ပြီး Eng-Myn ပြောင်းရိုက်လို့ရသလို Unicode နဲ့ Zawgyi ကိုလည်း Taskbar ရဲ့ Tray icons ထားရာနေရာကနေ အချိန်းအပြောင်းလုပ်ပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။
အရင် Unicode မသုံးခင်က Zawgyi-One သုံးပြီး တချို့ Files, Folders တွေကို မြန်မာလို ပေးခဲ့ဖူးရင် Widows ပြန်တင်လိုက်ရတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် Themes တွေ ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် မြန်မာလိုရေးထားတာတွေပျောက်ပြီး လေးဒေါင့်ကွက်တွေ ပေါ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အတွက် ဘယ်တော့မှ Update မထွက်တော့ပေမယ့် လက်ရှိအချိန်ထိ သုံးလို့ရနေတဲ့ Alpha Zawgyi 2008 Version ကိုသုံးပါ။ Installer ကို အောက်မှာပေးထားပါတယ်။
Firefox Browser တွေမှာ မြန်မာဖောင့် မမြင်ရဘူး ဆိုသူတွေ ဒီဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။ Google Chrome မှာ မြန်မာဖောင့် မမြင်ရဘူး ဆိုသူတွေ ဒီဗွီဒီယို ကိုကြည့်ပါ။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာတော့ ဒီ Blog မှာ များသောအားဖြင့် Software တွေ တိုက်ရိုက်တင်ပေးတာမျိုး ကျွန်တော်လုပ်လေ့မရှိပါဘူး။ Links တွေ ခဏခဏ ပျက်တတ်တာကြောင့်ရော၊ Copyright နဲ့ ငြိတာတွေကြောင့်ရော မတင်ပေးဖြစ်တာပါ။ ဒါပေမယ့် Font ပြဿနာက အဖြစ်များကြလို့ ဒီတစ်ခါတော့ လက်ရှိကျွန်တော်စုထားပြီး မဖြစ်မနေ သွင်းထားသင့်တဲ့ Fonts အများစုရယ်၊ Myanmar Keyboard တွေရယ် အားလုံးရောပြီး တင်ပေးထားပါတယ်။ Alpha Zawgyi 2008 Version အပါအဝင် Unicode Keyboard တွေပါ အစုံထည့်ထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာယူပါ။
ကျွန်တော်အခု ရေးခဲ့သလောက်ဆို Windows 10 မှာ မြန်မာဖောင့်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာအများစု ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
9:21 PM LeaveaComment Read More
7:50 PM3comments Read More
10:25 PM LeaveaComment Read More
တစ်ခုခုကို Google မှာ ရှာတိုင်း လိုအပ်တာနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ထပ်တူကျနိုင်တဲ့ ကြော်ငြာတွေ ဘယ်ကနေ ရောက်လာသလဲ ? အရင်ကရောက်ခဲ့တဲ့ နေရာကတွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က မမှတ်မိပေမယ့် Google ကဘာလို့ အကုန်မှတ်မိနေရတာလဲ ? မတော်လို့များ Administrator Password မေ့သွားခဲ့သော် ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲ ? ကိုယ်က ဘာစိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုတာ Google က ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်သလဲ ? နောင်တစ်ချိန်မှာ Google နဲ့ အဆက်ဖြတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်မိရင် Google Services မှာသိမ်းထားမိတဲ့ ကိုယ့် ​ဒေတာတွေကို ဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲ ?
Google ကို အားကိုးအားထားပြုပြီး ရပ်တည်နေကြတဲ့ သူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ နေရာ (၁၀) ခုအကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
၁။ ပုံမှန် Google Account သစ်တစ်ခု လုပ်မယ်ဆိုရင် @gmail.com နဲ့ ဆုံးတဲ့ address ပဲ ရမယ်ဆိုတာ အားလုံး သိကြတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်မှာ အရင်တည်းက သုံးနေတဲ့ Email Address တစ်ခုရှိနေပြီး အဲ့ဒီ့ Email နဲ့ပဲ Google Account တစ်ခု ဖန်တီးဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Special URL ကနေသွားရင် ကိုယ်သုံးနေတဲ့ တစ်ခြား Email Address တစ်ခုကို Google Username အဖြစ်ဖန်တီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၂။ Google ကနေပြီး ကိုယ်နေ့စဉ် လည်ပတ်သွားလာခဲ့တဲ့ နေရာတွေ၊ Google+ Account မှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ ဒေတာတွေနဲ့ တစ်ခြား အချက်အလက်တွေပေါ် အခြေခံပြီး လူတစ်ယောက်ချင်းစီ အတွက် သီးသန့် Profile တွေ နောက်ကွယ်မှာ ဖန်တီးထားပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အသုံးပြုသူဟာ အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ၊ ကျားလား-မလား၊ ဘာတွေ စိတ်ဝင်စားတတ်လဲ ဆိုတာပေါ် အခြေခံပြီး ရှာဖွေသူရဲ့ လိုလားချက်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် ads တွေ ဖော်ပြပေးနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ URL ကိုသွားကြည့်ပါ။ အင်တာနက်မှာ ကိုယ့်အပေါ် သုံးသပ်ထားတဲ့ Google ရဲ့ အမြင်ကို တွေ့ရှိရပါလိမ့်မယ်။
၃။ Google ကို သုံးခဲ့တဲ့ အချိန် ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဒေတာတွေကလည်း အနည်းနဲ့ အများ Google ရဲ့ ​ Products အသီးသီးမှာ ပျံ့နှံ့ ကုန်ကြတယ်။ ဥပမာပြရရင် - Gmail Messages တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ Contacts တွေ နောက် Youtube Videos တွေ ...။ ဒါတွေအားလုံးကို နောင်တစ်ချိန်မှာ အသုံးချနိုင်ဖို့ Backup လုပ်ထားချင်ရင် ဘယ်နည်းလမ်းကို သုံးကြမလဲ။ အဲ့အတွက် တစ်ခုတည်းသော အဖြေက Google Takeout ပါ။ တစ်နေရာတည်းက ကိုယ့် အကောင့်နဲ့ ပတ်သတ်သမျှ ဒေတာ အားလုံး ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ပါတယ်။
၄။ ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာတွေ၊ ကိုယ့် Products တွေကို ကိုယ့်ကိုယ်အသိမပေးပဲ တစ်ခြားတစ်နေရာမှာ သုံးနေတာတွေ့ရရင် DMCA ဥပဒေ (Digital Millennium Copyright Act) အရ Google မှာ ဖယ်ရှားပေးဖို့ တောင်းဆိုနိုင်သလို အဲ့ဒီ့ Websites ကို Google Search Results ကနေ ပျောက်သွားတဲ့အထိ အရေးယူပေးဖို့ အကူအညီ တောင်းခံနိုင်ပါတယ်။
၅။ Android Device တစ်ခုခုကနေ အင်တာနက် သုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ့ Devices တွေက ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိတည်နေရာ၊ တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို သွားနေတယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်လောက် အမြန်နှုန်းနဲ့ သွားနေတယ် ဆိုတာတွေထိ Google Servers ဆီကို လှမ်းပြီး Report လုပ်ကြပါတယ်။ အဲ့တာကို လေ့လာချင်ရင် အောက်ဖော်ပြပါ URL ကနေသွားကြည်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ Location History ကို ရက်အလိုက် လအလိုက် ပြန်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေကို KML files အနေနဲ့ Export လုပ်ထားနိုင်ပြီး Google Earth မှာ ပြန် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၆။ ကိုယ့်အကောင့်ထဲကို Login ဝင်ထားတဲ့အချိန် Search Boxes မှာ ရိုက်ပြီး ရှာခဲ့သမျှတွေ ကိုယ် Click ခဲ့သမျှ Google ad တွေကိုလည်း Google ကနေ Log တစ်ခုနဲ့ မှတ်ထားတတ်သေးတယ်။ Google ဘာတွေမှတ်ထားသလဲ ဆိုတာကို အောက်က Links တွေကနေ ကြည့်ကြည့်ပါ။
၇။ Google Account တစ်ခု ဖန်တီးထားရင် အနည်းဆုံးတော့ ကိုးလမှာ တစ်ကြိမ် Login ဝင်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင် Google ရဲ့ Program Policies အရ အကောင့်ကို ဖျက်သိမ်းခွင့် ရှိပါတယ်။ အကောင့်တစ်ခုတည်းရှိပြီး အဲ့တာကိုပဲ အမြဲသုံးတဲ့သူတွေအတွက် ပြဿနာမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်မှာ တခြား Google Accounts တွေရှိပြီး ပုံမှန် ဝင်မကြည့်ဖြစ်ဘူးဆိုရင် ဖျက်သိမ်းခံရတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် လက်ရှိ ကိုယ်အမြဲသုံးဖြစ်တဲ့ အကောင့်ကို Secondary Accounts ရဲ့ Trusted Content အနေနဲ့ ထားသင့်ပါတယ်။ အဲ့လိုဆိုရင် အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်တိုင်း ဒုတိယအကောင့်ကို Login ဝင်ပေးဖို့ Google ကနေ အသိပေးပါလိမ့်မယ်။
၈။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့် Google Account ကို ဝင်သုံးမှာကိုများ စိတ်မပူမိကြဘူးလား။ ဒီခံစားချက်ကိုတော့ လူတိုင်း ခံစားဖူးကြမှာပါ။ အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ Activity Report ကိုသွားကြည့်ပါ။ ကိုယ့် Google Account ကို ဘယ်နေရာကနေ ဘာ Devices သုံးပြီးဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ပြန်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ သူတစ်ယောက် တစ်ခြားနေရာကနေ အသုံးပြုနေတာ တွေ့ရမယ်ဆိုရင် IP address နဲ့ ခန့်မှန်းတည်နေရာကိုပါ သိရှိနိုင်တာကြောင့် လိုအပ်ရင် Password ကို အမြန်ပြောင်းထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
၉။ တစ်ခါတစ်လေမှာ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့ Web apps တွေ Browser extensions တွေ Google Scripts တွေနဲ့ တခြား Mobile apps တွေကို ကိုယ့်ကိုယ်စား Read or Write access ပေးမိတာမျိုး ရှိတတ်တယ်။ Google User တစ်ယောက် ဖြစ်လာရင် ဒီအချက်ကို Control လုပ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ နေရာမှာ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ဘယ် အရာတွေကို ဘယ်လောက်ထိ Permission level ပေးထားမိတယ်ဆိုတာ ပြန်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အတွက် မလိုအပ်တာတွေကို Revoke Access လုပ်ထားဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
၁၀။ ဒီအောက်ဆုံး တစ်ခုကတော့ Google App Users များအတွက်ပါ။ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ကိုယ့် Google Account သူများလက်ထဲ ရောက်သွားတယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Secret link ကနေတဆင့် ကိုယ့်ရဲ့ Admin password ကို Reset ပြန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
domain.com ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့် Web Domain အမည်ကို ထည့်သွင်းပေးရပါမယ်။
11:07 AM LeaveaComment Read More
Cloud Storage နဲ့ ပတ်သတ်ရင် ခုချိန်ထိ Dropbox ကိုပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ သုံးနေဖြစ်သေးတယ်။ ခုချိန်မှာ Dropbox ထက် Storage Space ပိုပေးနိုင်တဲ့ တခြား Services တွေ အများကြီး ရှိနေပြီ ဆိုပေမယ့် ခုချိန်ထိ Dropbox ကိုပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ သုံးဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းက သုံးရလွယ်တယ်။ သစ္စာရှိတယ်။ အလကားသုံးနေတဲ့ User ပဲ ဆိုပြီး ဘယ်တော့မှ ပြစ်ပြစ်ခါခါ မလုပ်တတ်ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်နီးပါးလောက်က Dropbox နဲ့ စရင်းနှီးခဲ့ပြီး အကောင့်တစ်ခု စလုပ်ခဲ့တယ်။ ပိုက်ဆံပေးမသုံးနိုင်တော့ အလကားရတဲ့ 2GB ပမာဏလေးကို ကိုယ့်အတွက် မဖြစ်မနေ အရေးကြီးပြီး ပျောက်ပျက်လို့ မရတဲ့ Data တွေ သိမ်းခဲ့တယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ပြန်မယ်လုပ်တော့ အဲ့ဒေတာတွေ အားလုံး ပြန်ယူခဲ့ပေမယ့် အကောင့်ထဲ ကိုတော့ အရေးကြီးတဲ့ ဒေတာတွေကလွဲရင် ကျန်တာတွေ မဖျက်ခဲ့ဘူး။
ဖျက်ဖို့လည်း မလိုအပ်ဘူးလေ။ Cloud Storage Service ပေးတဲ့နေရာ အတော်များများက ပုံမှန်အားဖြင့် သူ့တို့ Service ကို Access မလုပ်တာ တစ်လနဲ့ အထက်ကြာပြီ ဆိုရင် အဲ့လို Active မဖြစ်တဲ့ အကောင့်တွေကို ဖျက်ပစ်တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ထင်ခဲ့တာ ဒီတစ်ခါတော့ မှားတယ်။ Dropbox ကတော့ အဲ့လို မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်အတွက် မလိုအပ်တော့တဲ့ အကောင့်တစ်ခုကို မသုံးခဲ့တာ ၃ နှစ်နီးပါး ကြာပေမယ့် လုံးဝမဖျက်ခဲ့သလို အထဲက ဒေတာတွေကလည်း နဂိုအတိုင်း အရာမယွင်း ကျန်နေခဲ့သေးတယ်။
ဒါ့ကြောင့်လည်း အတော်များများက Cloud Storage ဆို Box တို့ Google Drive တို့ SkyDrive တို့ ရှိပေမယ့် Dropbox ကိုပဲ အရင်ဆုံး ပြေးမြင်ကြတယ်။ ခုလို အားသာချက်တွေ Dropbox မှာ ရှိပေမယ့် တကယ်တမ်း Dropbox ကို သုံးကြတဲ့အခါ လူတိုင်းနီးပါး ဘဝင်မကျဖြစ်ရတဲ့ အချက်တစ်ချက်လည်း ရှိသေးတယ်။ အဲ့တာက ကိုယ့်စက်ထဲကနေ Cloud Storage ပေါ် တင်ချင်တဲ့ Files တိုင်း Folders တိုင်းကို Dropbox Sync folder ထဲ သွားသွားထည့်ရတဲ့ အချက်ပဲ။ Dropbox ကလည်း သူ့ဖိုဒါထဲကို လာထည့်တဲ့ ဖိုင်တွေ ဖိုဒါတွေကိုပဲ Synchronize လုပ်ပေးတယ်။ ဒီကြားထဲ ကိုယ်က စက်ထဲမှာရှိတဲ့ Directories အမျိုးမျိုးက ဖိုင်တွေ ဖိုဒါတွေကို Dropbox Account နဲ့ ချိတ်ပြီး Synchronize လုပ်ချင်ရင် ပိုပြီးအာရုံနောက်ရတယ်။
အဲ့တာတွေ အားလုံးကို ပြေလည်စေတဲ့ တစ်ခြားနည်းလမ်း ရှိတယ်ဆိုတာ အရင်က လုံးဝမသိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ခုချိန်မှာ အဲ့လောက်ထိ မခက်ခဲတော့ဘူး။ ဒီအခက်အခဲကို ပြေလည်စေမယ့် Third-party Windows application လေးတစ်ခု တွေ့ထားတာ ရှိတယ်။ Dropbox Folder Sync လို့ခေါ်တယ်။ သူက Symbolic Link လို့ခေါ်တဲ့ Reference File အမျိုးအစားကို သုံးထားတယ်။ ဘာနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး တူသလဲဆို Windows တိုင်းမှာ အမြဲလိုလို တွေ့ရတဲ့ Shortcut files လိုမျိုးပဲ။ ဒီနေရာမှာ မြင်နေရတဲ့ ဖိုင်က နောက်တစ်နေရာမှာ ရှိတဲ့နေရာကို ပြန်ညွှန်းတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ Directories တစ်ခုစီက ကိုယ် Synchronize လုပ်ချင်တဲ့ ဖိုင်တွေ ဖိုဒါတွေကို Dropbox folder နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးတယ်။
Dropbox Folder Sync ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ အသေးစိတ်ကို Features in detail ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်တယ်။ သုံးပုံသုံးနည်းကလည်း တအားကို ရိုးရှင်းတယ်။ Dropbox Folder Sync ကို တင်ပြီး တစ်ခြား Directories အသီးသီးက ကိုယ် Synchronize လုပ်ချင်တဲ့ ဖိုင်တွေ ဖိုဒါတွေကို Right Click ကနေတဆင့် Dropbox Folder Sync > Sync with Dropbox ဆိုပြီး နှိပ်လိုက်ရင် ရပြီ။
တကယ်လို့ နောက်ပိုင်း Synchronize မလုပ်ချင်တော့ရင် နဂို Synchronize လုပ်ခဲ့တဲ့ Directory ကိုပြန်သွားပြီး Right Click ကနေတဆင့် Dropbox Folder Sync > Unsync with Dropbox ပြန်လုပ်လို့ ရတယ်။ အဲ့လို လုပ်လိုက်ရင် Symbolic Link ကိုဖျက်ပြီး မူလနေရာကို နဂိုအခြေအနေအတိုင်း ဖိုဒါ ပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။
Dropbox Folder Sync ကို Windows XP, Vista, 7, 8 နဲ့ 8.1 တွေမှာ သုံးလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် Network Drives တွေမှာတော့ သုံးလို့ မရဘူး။
6:34 PM LeaveaComment Read More
Windows 10 ကို Virtual Box နဲ့ စမ်းသုံးကြည့်လိုက်တော့ အမြင်အားဖြင့် ဘာမှ သိပ်ထူးခြားမှု မရှိသလို ထင်ရပေမယ့် လက်တွေ့မှာ အပြောင်းအလဲ အတော်များများ ပြုလုပ်ထားတာ တွေ့လာရတယ်။ ဝင်းဒိုးထဲစဝင်ဝင်ချင်းမှာ ပထမဆုံး သတိထားမိတာက Start Menu - သိရသလောက် Desktop နဲ့ Laptop Users အများစုက Charms Bar နဲ့ Start Menu Screen ကို သဘောမကျကြဘူး။ လှသလိုလို ခံစားရပေမယ့် Touch-Enabled Devices မဟုတ်လို့ ထင်သလောက် အသုံးမတဲ့ဘူးလို့ ယူဆလို့ရတယ်။ ဒါကို မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကလည်း လက်ခံတယ်။ နောက်လာမယ့် Windows 10 Final Version မှာ Charms Bar က Touch-Enabled Devices တွေကလွဲရင် ပါလာမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ Start Menu Screen ကတော့ "Taskbar and Start Menu Properties" Dialog Box အောက်က "Start Menu" Tab အောက်မှာရှိတဲ့ "Use the Start menu insted of the Start Screen" ကို Deselect လုပ်ပေးလိုက်ရင် အရင်လို ပြန်ရပါတယ်။
ပြီးတော့ Restart နဲ့ Shut Down ကလည်း အရင်တုန်းကထက်စာရင် Access လုပ်ဖို့ အများကြီး လွယ်ကူသွားပြီ။ အိမ်မှာ တစ်လခြား တစ်ခါလောက် ဝင်းဒိုးပြောင်းတင်လေ့ရှိတော့ Windows 8 တင်တိုင်း အိမ်ကမိန်းမနဲ့ အမြဲပြဿနာ တက်ရတယ်။ သူက Restart နဲ့ Shut Down ဘယ်နားရှိတယ်ဆိုတာ မရှာတတ်ဘူး။ နောက်ပိုင်း သင်ပေးလို့ သုံးတတ်သွားပေမယ့် Windows 8 တို့ 8.1 တို့ဆို သူအာရုံ သိပ်မလာတာ ကျွန်တော် သတိထားမိတယ်။ ခုတိုင်းဆို Windows 10 မှာတော့ အာရုံပြန်လာမယ့် သဘောရှိတယ်။
နောက်ပြီး ဝင်းဒိုးထဲ စရောက်ရောက်ခြင်းမှာ တစ်ခြား ဘာမှ လိုက်မကြည့်ပဲ မြန်မာဘာသာနဲ့ ပြောင်းသုံးလို့ ရမရ ပထမဆုံး သွားကြည့်ဖြစ်တယ်။ အဖြေကတော့ လက်ရှိအချိန်ထိ "No" ပါ။ အရင် Windows 8 မှာတုန်းကတော့ Windows စတင်တင်ချင်း Keyboard or Input Method မှာ Myanmar ဆိုပြီး ရွေးစရာပါလာတာ သတိထားမိတယ်။ စမ်းလည်း စမ်းကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲ့လိုတင်လိုက်ရင် မြန်မာလက်ကွက်နဲ့ Keyboard တစ်ခုပါလာပေမယ့် လက်တွေ့သုံးကြည့်တဲ့အခါ တစ်ခြား မြန်မာကီးဘုတ်တွေ ထပ်တင်ရင် Conflict ဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားမျိုး တွေ့ရတယ်။ ကိုယ့်စက်တစ်ခုတည်း ဖြစ်တာလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ အခုလည်း Windows 10 မှာ Myanmar Fonts ဆိုလို့ Myanmar Text ဆိုတဲ့ ဖောင့်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ Regular နဲ့ Bold ဆိုပြီး ၂ မျိုးခွဲ ထည့်ပေးထားတာ တွေ့ရတယ်။ အဲ့တာကိုတော့ အားမရဘူး။
နောက်ထပ် စပ်စုမိတာတစ်ခုက အရင် x32-bit Windows တွေမှာ မြန်မာဖောင့်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြဿနာ မရှိခဲ့ဘူး။ မြန်မာလိုမြင်ချင် မြန်မာလိုရိုက်ချင်ရင် သုံးနေကျ Alpha Zawgyi Version 2.0.0.12 သုံးလိုက်ရင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် x64-bit ကိုပြောင်းသုံးတော့ ကီးဘုတ်က အဆင်ပြေပေမယ့် တချို့ Apps တွေမှာ မြန်မာလို ကောင်းကောင်းမပေါ်တာ တွေ့လာရတယ်။ ဒါပေမယ့် Windows7x64-bit အထိ အဲ့တာက ပြဿနာ မဟုတ်သေးဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Personalization အောက်က Window Color and Apperence ကို ဝင်လိုက်ရင် Advanced Apperance Settings ဆိုတာရှိတယ်။ အဲ့မှာ Item တစ်ခုချင်းစီကို လိုချင်တဲ့ Font ပြောင်းလို့ရတယ်။ ဒီလောက် အဆင်ပြေနေတဲ့ Apperance Settings က Windows 8 နဲ့ 8.1 လည်း ရောက်ရော ဘယ်နားရောက်သွားမှန်း မသိတော့ဘူး။ အဲ့ဒီ့ Advanced Apperance Settings မပါတာက x32-bit Windows မှာ Alpha Zawgyi Version 2.0.0.12 ရှိနေလို့ ပြဿနာ မဟုတ်ပေမယ့် x64-bit ကိုလည်း ပြောင်းရော အဆင်မပြေတော့ဘူး။ ဒီပြဿနာတွေ ပြေလည်ဖို့ Advanced Apperance Settings များ Windows 10 မှာ ပြန်ပါမလားဆိုပြီး ရှာကြည့်မိတယ်။ လက်ရှိ Windows 10 Technical Preview မှာ ပါမလာသေးတာတော့ သေချာသွားပါပြီ။ Final မှာ ပြန်ပါလာနိုင်မလား ဒါကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရဦးမယ်။
နောက်ထပ်ထူးခြားတာတွေကတော့ အရင်က သီးခြားစီဖြစ်နေတဲ့ Metro / Modern / Universal / Windows Store Apps တွေ အခုဆို Desktop ပေါ်မှာ Run နိုင်နေပြီ။ နောက်ပြီး Linux မှာ ရှေးပဝေသဏီတည်းက သုံးလို့ရတဲ့ Virtual Desktops အခု Windows မှာလည်း သုံးနိုင်ပြီ။ နောက် Command Prompt မှာလည်း အများကြီး ပြောင်းလဲမှုလုပ်ထားတာ တွေ့ရတယ်။ အဲ့တာကိုတော့ နောက်မှ ထပ်ရေးဦးမယ်။
11:14 AM LeaveaComment Read More
တစ်နေ့က အသိတစ်ယောက်ရဲ့ ကွန်ပြူတာ ဝင်းဒိုးတင်ရင်းနဲ့ ဒေတာ ပျောက်တဲ့ ပြဿနာ တက်တယ်။ Partitions တွေကို မှားပြီး Format ချမိရာကနေ ဖြစ်တာလို့ ပြောတယ်။ ​သူက ဒေတာတွေ ပြန်လိုချင်တယ်။ အဲ့စာကို တွေ့တွေ့ချင်းပဲ စာပြန်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် သူရော ကျွန်တော်ရော ကံဆိုးခဲ့တယ်။
ရေးလက်စ လမ်းတစ်ဝက်မှာ မီးအားစောင့်တက်ပြီး ကျွန်တော့် ကွန်ပြူတာအဟောင်းက Adapter ကြွသွားတယ်။ အဲ့ဒီ IBM Laptop က ဘက်ထရီမကောင်းတော့ Adapter ကို အားကိုးပြီး ရပ်တည်နေတာ ကြာပြီ။ ရေးလက်စတွေပျက်ပြီး ကွန်ပြူတာထဲလည်း ပြန်ဝင်လို့ မရတော့ဘူး။ ခုတော့ ပြန်အဆင်ပြေပါပြီ။
လိုရင်းကို ဆက်ရရင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျောက်သွားတဲ့ ဒေတာတွေကို ပြန်လိုချင်တဲ့အခါ အရင်ဆုံး အချက်( ၂ ) ချက်ကို စဉ်းစားရတယ်။
ရုတ်တရက်ဆို ဒေတာပျောက်တာ အချိန်နဲ့ ဘာဆိုင်လဲလို့ မေးစရာရှိတယ်။ တစ်ချို့က ဒေတာပျောက်ရင် Recovery ပြန်မလုပ်တတ်ဘူး။ တစ်ချို့ကျတော့ Recovery ပြန်လုပ်လို့ ရတယ်ဆိုတာတောင် မသိသေးဘူး။ အဲ့လိုအခြေအနေမှာ ကိုယ့်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေ သိမ်းဖို့ အကြောင်းကလည်း ပေါ်လာတယ်။ ဒေတာပျောက်နေတဲ့ Partition ကလည်း Free Space ဆိုပြီး ပြနေတယ်။ အဲ့တော့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မစဉ်းစားတော့ပဲ အဲ့နေရာကိုပဲ Paste လုပ်လိုက်တယ်။ အဲ့မှာ ပြဿနာကစတယ်။ တကယ်တော့ ဒေတာပျောက်တဲ့ ပြဿနာ အတော်များများမှာ Hardware Failure ကြောင့်မဟုတ်ရင် Recovery ပြန်လုပ်တဲ့အခါ ဒေတာ ပြန်ရဖို့ ၉၀% လောက် သေချာတယ်။ HardDrive ပေါ်မှာ ပျောက်သွားတဲ့ ဒေတာတွေ ရှိနေပေမယ့် လက်ရှိအချိန်မှာ သူတို့တွေကို မမြင်ရတဲ့ အကြောင်းက သူတို့တွေ HardDrive ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ စာရင်းလုပ်ပေးထားတဲ့ Table တစ်ခုရဲ့ List ကနေ ပျက်သွားတဲ့ အဆင့်မှာပဲ ရှိသေးတယ်။
Library တစ်ခုမှာ ဘယ်နေရာမှာ ဘာစာအုပ်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို အလွယ်တကူ ကြည့်နိုင်တဲ့ Catalogue ကိုလူတိုင်း တွေ့ဖူးကြလိမ့်မယ်။ Catalogue ထဲကနေ စာရွက် ၂ ရွက်လောက် အဖြဲခံလိုက်ရတာနဲ့ Library ထဲက စာအုပ်တွေ ပျောက်သွားတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် လိုချင်တဲ့စာအုပ်ကို ရှာတဲ့အခါကျရင်တော့ ဘယ်နားမှာ ဘယ်စာအုပ်ထားတယ်ဆိုတာ အလွယ်တကူ မသိနိုင်တော့ဘူး။ ခုလည်း ဒီသဘောပဲ။
HardDrive ပေါ်မှာတော့ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ရှုပ်တယ်။ ဖိုင်တစ်ခုခုဟာ HardDrive ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို စာရင်းသွင်းပေးထားတဲ့ Table ရဲ့ List ကနေ အဖျက်ခံလိုက်ရတာနဲ့ ကွန်ပြူတာက အသုံးမလိုတော့တဲ့ ဖိုင်အဖြစ် ယူဆပြီး အဲ့နေရာကို Free Space အဖြစ် ကြေငြာလိုက်တယ်။ တကယ်တမ်း HardDrive ပေါ်မှာ အဲ့ဖိုင် ရှိနေပေမယ့် အလွယ်တကူ ပြန် Access လုပ်လို့ မရနိုင်တော့ဘူး။ အဲ့အချိန်မှာ Recovery အချိန်မှီ ပြန်လုပ်နိုင်ရင် သူတို့ကို ပြန်ရဖို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Free Space လို့ ပြနေတဲ့ နေရာကို နောက်ထပ် ဒေတာအသစ်တွေ ထပ်ရိုက်လိုက်ရင်တော့ အရင်က HardDrive ပေါ်မှာ ရှိနေခဲ့တဲ့ ဒေတာအဟောင်းတွေက ဒေတာအသစ်အတွက် နေရာဖယ်ပေးလိုက်ရတယ်။ အဲ့လိုအခြေအနေ ဆိုရင်တော့ ဘာ Recovery Software မှ သုံးမနေနဲ့တော့။ အကောင်းအတိုင်း ပြန်ရဖို့ မသေချာတော့ဘူး။
Recovery ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်နရာခိုင်နှုန်း အကောင်းအတိုင်း ပြန်ရနိုင်လဲဆိုတာ ဒေတာအသစ် ထပ်ရိုက်လိုက်မိတဲ့အပေါ် အများကြီး မူတည်တယ်။ ပျောက်သွားတဲ့ နေရာပေါ်ကို လုံးဝ ဘာဒေတာမှ ထပ်မရိုက်ထားမိပါဘူးဆိုရင် ၉၀% လောက် ပြန်ရနိုင်တယ်။ ပျောက်နေတဲ့ ဒေတာက 5GB - Recovery လုပ်လို့ရမှန်း မသိလို့ အသစ်ထပ်ရိုက်မိတာက 20 GB ဆိုရင်တော့ အကောင်းအတိုင်း ပြန်ရနိုင်ဖို့ ၁၀% တောင် မသေချာဘူး။
အဲ့တာကြောင့် အရေးကြီးတဲ့ ဒေတာတစ်ခုခု ပျောက်ခဲ့ရင် အချိန်က အရေးကြီးတယ်။ Recovery ပြန်မလုပ်ဖြစ်တဲ့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ဒေတာအဟောင်းတွေ ရှိတဲ့နေရာကို ဒေတာအသစ်တွေ နေရာဝင်ယူသွားဖို့က ရာခိုင်နှုန်း ပိုများလာတတ်တယ်။ ကိုယ်ကမလုပ်တောင် တစ်ခြားသူတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် System ကနေ လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာကို သိထားဖို့ လိုတယ်။
ဒေတာပျောက်ရခြင်း အကြောင်းအရင်း အမျိုးမျိုးရှိတယ်။
Hidden လုပ်ခံလိုက်ရလို့ ပျောက်တာရှိတယ်
Format ချမိလို့ ပျောက်တယ်။
Partitions တွေ Re-size and Move လုပ်ရင်းနဲ့ ပျောက်တာရှိတယ်။
Windows တင်ရင်းနဲ့ ပျောက်တာရှိတယ်။
Bad Sectors ကြောင့်ပျောက်တာရှိတယ် .... စသဖြင့်။
အဲ့ထဲမှာ Hidden လုပ်ခံလိုက်ရလို့ ပျောက်တဲ့ ပြဿနာက များသောအားဖြင့် Recovery ပြန်လုပ်ဖို့ မလိုဘူး။ Linux Live CD တစ်ချပ် ဆောင်ထားပြီး အဲ့ဒီ့ကနေ Boot တက်ကြည့်လိုက်ရင် ပျောက်တယ်လို့ ထင်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့်ဖိုင်တွေကို အကောင်းအတိုင်းတွေ့နိုင်ပြီး ဘယ်ကောင်တွေက Hide ထားတာလဲ ဆိုတာပါ ကြည့်နိုင်တယ်။ ရှင်းရလွယ်ပြီး ဆိုးကျိုးနည်းတယ်။
နောက်တစ်နည်းကတော့ Linux နဲ့ မရင်းနှီးသေးရင် USB နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ autorun.inf, new folder.exe, bha.vbs, ravmon.exe ... တွေရှင်းနိုင်ဖို့ USB Fixer တွေ အင်တာနက်ထဲမှာ အတော်များများ အလကားပေးထားတာ ရှိတယ်။ ဥပမာ - USB File Unhider, After Death, Shortcut Virus Fixer ပမာဏလည်း ဘယ်လောက်မှ မရှိဘူး။ သုံးရတာလည်း လွယ်တယ်။
ဗိုင်းရပ်စ် ကိုက်လို့ ဒေတာပျောက်ခဲ့ရင်တော့ အပေါ်ကနည်းနဲ့လည်း ရံဖန်ရံခါ အဆင်ပြေနိုင်သလို တစ်ခါတစ်လေ Recovery ပြန်လုပ်မှ အဆင်ပြေတတ်တာလည်းရှိတယ်။ Recovery လုပ်ဖို့ဆိုရင် ကျွန်တော် သုံးခဲ့ဖူးသလောက် အတွေ့အကြုံအရ GetDataBack က အဆင်အပြေဆုံးပဲ။ Freeware သုံးချင်ရင် Recuva ဆိုတာ ရှိတယ်။ GetDataBack လိုချင်ရင် Warez-BB မှာ အလွယ်တကူ ရှာနိုင်တယ်။ ဒီကနေ တင်ပေးလို့ရပေမယ့် နောက်ပိုင်း တင်ပေးထားတဲ့ links တွေ ပျက်သွားရင် အသုံးမဝင်မှာ စိုးလို့ မတင်တော့ဘူး။
Format ချမိလို့၊ မှားဖျက်မိလို့၊ Windows တင်လိုက်လို့ ... စတဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဒေတာပျောက်ခဲ့ရင်လည်း Recovery ပြန်လုပ်မှ အဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမယ့် Bad Sectors ကြောင့် ဒေတာပျောက်တာဆိုရင်တော့ ရှော့ရှိတယ်။ အဲ့တာက Hardware Failure ကြောင့် ဒေတာပျောက်တဲ့ အမျိုးအစားထဲမှာပါတယ်။ Bad Sectors ကြောင့်ဆိုရင် Recovery ပြန်လုပ်လည်း Errors အမျိုးမျိုး ပြတတ်တယ်။ Bad Sectors တွေကို Repair ပြန်လုပ်ဖို့ လိုတယ်။
Image Credit >> http://www.portstrategy.com/news101/insight-and-opinion/post-script/page2
9:02 AM LeaveaComment Read More
ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်လာဖို့ နှစ်နဲ့ချီပြီး သန္ဓေတည်ခဲ့တယ်။ ဖြစ်ပုံက ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဝန်းကျင်လောက်မှာ နည်းပညာအကြောင်း အသားပေးရေးကြတဲ့ ဘလော့ဂါအများစု အပါအဝင် တစ်ခြားဘလော့ဂါတွေပါ ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးနေရာကနေ ယူနီကုတ်-ယူနီကုတ်ဆိုပြီး ယူနီကုတ်ကို ပြောင်းရေးကြဖို့ ဆော်သြလာကြတယ်။ တစ်ချို့လည်း နေမြဲအတိုင်း ဇော်ဂျီနဲ့ပဲ ဆက်ရေးခဲ့ကြသလို တစ်ချို့တစ်ချို့လည်း အလားအလာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ကြေးပေးကြတာများတဲ့ ယူနီကုတ်ဘက်ကို ဘက်ပြောင်းချင်တာနဲ့ လက်ရှိရေးလက်စ ဇော်ဂျီဘလော့ကို ဇာတ်သိမ်းပြီး ယူနီကုတ်ဘဝ ပြောင်းခဲ့ကြတယ်။
အဲ့ထဲမှာ ဒီဘလော့လည်း အပါအဝင်ပဲ။ သူများယောင်လို့ လိုက်ယောင်ခဲ့တာ မဟုတ်ပေမယ့် ဇော်ဂျီကနေ ယူနီကုတ်ကို ပြောင်းစမှာ ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်လောက် ကြုံခဲ့ရတယ်။ အဲ့တာတွေ ပြန်ပြောရင်တော့ ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင်ပဲ။ အဆိုးဆုံးက စာပုံမှန် မရေးနိုင်လို့ စိတ်မကောင်းရတဲ့ကြားထဲ ဘလော့အဟောင်းလေးကို ပြန်ပြန်ဝင်ကြည့်တိုင်း မြန်မာစာကောင်းကောင်း မမြင်ရတာ အတော် စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ရတယ်။
အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိမယ့် နည်းတွေနဲ့ အချိန်ရတိုင်း ပြန်ပြင်ပေမယ့် ရလဒ်က မကောင်းခဲ့ဘူး။ အဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံး ယူနီကုတ် ပြောင်းထားတဲ့ ဘလော့ကိုဇာတ်သိမ်းပြီး ဇော်ဂျီနဲ့ ပြန်ပြောင်းရေးဖို့ထိ တွေးမိခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်လိုအတွေးမျိုး ယူနီကုတ်နဲ့ အဆင်မပြေသူတိုင်း တွေးမိကြလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းခဲ့တာပဲလား - အချိန်မပေးနိုင်လို့ မသိခဲ့တာလား - ဇော်ဂျီကနေ ယူနီကုတ်ဘလော့ ပြောင်းဖို့ အင်တာနက်ထဲမှာ လမ်းညွှန်ချက် အများအပြား ရှိပေမယ့် ဘလော့တစ်ခုလုံးကို ယူနီကုတ်ကနေ ဇော်ဂျီပြောင်းဖို့ လမ်းညွှန်ချက်ကျတော့ ဘယ်လိုမှ ရှာလို့မတွေ့ခဲ့ဘူး။
လမ်းညွှန်ချက်ကမရှိ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘာ Programming မှ နားမလည်။ ပြောင်းထားပြီးသား ယူနီကုတ်ဘဝနဲ့ပဲ ဆက်နေလာခဲ့တာ ခုတော့ ယူနီကုတ်ကို ပြောင်းခဲ့တာ မမှားဘူးဆိုတဲ့ အသိတစ်ခုတော့ ရခဲ့ပြီ။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ယူနီကုတ်ကို စိတ်ပျက်ပြီး ဇော်ဂျီနဲ့ ပြန်အသက်ဆက်ဖို့ ကြိုးစားချင်ကြမယ့် တစ်ချို့ တစ်ချို့သော ဘလောဂါများအတွက် ယူနီကုတ်ပြောင်းထားပြီးသား ဘလော့တစ်ခုလုံးကို ဇော်ဂျီပြန်ပြောင်းပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ကျွန်တော် အခုသိခဲ့ပါပြီ။ နည်းလမ်းကတော့ -
ပုံမှန်အတိုင်း ကိုယ့်ဘလော့ကို ဝင်ပြီး Export Blog လုပ်ပါ။
.xml နဲ့ဆုံးတဲ့ ဖိုင်တစ်ခု ရလာပြီဆိုရင် လက်ရှိဘလော့ကို ဘာမှ မလုပ်သေးဘဲ AyarUnicodeGroup ကနေ ဖန်တီးထားတဲ့ MyanmarFontConverter စာမျက်နှာကိုသွားပါ။
Upload ကနေတဆင့် ကိုယ့်ဘလော့ရဲ့ xml ဖိုင်ကိုရွေးပြီး Upload တင်ပါ။
Input Font နေရာမှာ Myanmar3 ရွေးပြီး Output Font မှာ ZawGyi-One ရွေးပါ။
ပြီးရင် Check English Words automatically ကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီး Convert လုပ်ပါ။
ခဏစောင့်လိုက်ရင် ဇော်ဂျီပြောင်းထားပြီးသား xml ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ Link ပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီ xml ဖိုင်ကို ကိုယ့်ဘလော့က ယူနီကုတ် ပို့စ်တွေ ဖျက်ပြီး Import ပြန်လုပ်ရပါမယ်။ အကြံပေးချင်တာတော့ ဘလော့သစ်တစ်ခု ဖန်တီး၊ အဆင်ပြေမပြေ စမ်းသပ်ကြည့်ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှ ယူနီကုတ် ပို့စ်တွေ အပြီးဖျက်ပါ။
ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ကတော့ ရထားသမျှ PageViews အကုန်ပျက်မယ်။
ပို့စ်အရေအတွက် များတဲ့ ဘလော့တွေမှာဆိုရင် ပို့စ်အကုန်လုံး Import လုပ်လို့မရ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ပို့စ်အရေအတွက် အရမ်းများရင် ပို့စ်အားလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် Import လုပ်တဲ့အခါ Blogger က Spam Posts တင်တယ်လို့ ယူဆတတ်တယ်။
Import လုပ်တဲ့ ပို့စ်အရေအတွက် ၂၀၀ ကျော်သွားရင် ဆက် Import လုပ်ခွင့် မပေးဘဲ ရပ်သွားတတ်တယ်။
ပို့စ်အရေအတွက် ၂၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲ ရှိတဲ့ ဘလော့တွေဆိုရင် အဆင်ပြေတယ်။
ပို့စ်အရေအတွက် ၂၀၀ ကျော်တဲ့ ဘလော့တွေကတော့ ကိုယ့်ပို့စ်တွေကို အရင်ဆုံး အပိုင်းလိုက်ခွဲ Export လုပ်ပြီးမှ ရက်ခြားပြီး ပြန် Import လုပ်နိုင်ရင် အဆင်ပြေမယ်။
ကျွန်တော်တော့ ၃ နှစ်ကျော် လေးနှစ်နီးပါး ဖြတ်သန်းပြီးတဲ့ နောက်မှာ ယူနီကုတ်နဲ့ အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီမို့ ဇော်ဂျီပြန်ပြောင်းဖို့ စိတ်ကူး မရှိတော့ဘူး။ မြန်မာယူနီကုတ် စံသတ်မှတ်ချက်နဲ့ အညီရေးထားတဲ့ ဒီဘလော့ကို အခုဆိုရင် Browser အတော်များများကနေ ဘာ ဖောင့်မှာ သွင်းစရာမလိုပဲ ကြည့်လို့ရအောင် ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီ။ အဲ့အတွက်လည်း MMWebFonts ဖန်တီးပေးခဲ့သူတွေကို အထူးကျေးဇူးတင်မိတယ်။ Templates အတော်များများနဲ့ စမ်းသပ်ပြီးခဲ့သလို Mobile Devices တွေနဲ့လည်း ဖတ်လို့ ကြည့်လို့ အဆင်ပြေအောင် Responsive Design ကို ပြောင်းခဲ့ပြီးပြီ။ ရှေ့လျှောက်မှာ မြန်မာယူနီကုတ် အနာဂတ်လည်း ဒီ့ထက်ပိုပြီး လှလာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်။
8:01 PM LeaveaComment Read More
The Best Services for Large Files Sharing
အင်တာနက်ထဲမှာ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် တစ်စုံတစ်ခုကို တစ်စုံတစ်ယောက် ဆီ အွန်လိုင်းကနေ ပို့ချင်တယ်ဆိုရင် ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်နေကျ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၂)မျိုးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါက -
ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ ဖိုင်ဟာ အရွယ်အစားသိပ်ကြီးကြီးမားမား မဟုတ်ဘူးဆိုရင် Email နဲ့အတူ တွဲပြီးပို့တယ်။
တကယ်လို့ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ဖိုင်က Email နဲ့ တွဲလို့ရလောက်တဲ့ ပမာဏထက် ကျော်နေမယ်ဆိုရင် File Hosting Service တစ်ခုခုမှာ Upload တင်ပြီး ရလာတဲ့ Link ကို လက်ခံမယ့်သူဆီ ပို့တယ်။
ဖော်ပြခဲ့တဲ့ နည်းလမ်း(၂)ခုက ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်နေကျ နည်းတွေပါ။ ဒီနည်းတွေကို အွန်လိုင်းမှာ Sharing လုပ်ဖူးတဲ့ သူတော်တော်များများ အကျွမ်းတဝင် ရှိကြတယ်။ ပထမနည်းကို သုံးမယ်ဆိုရင် Email နဲ့အတူ ဖိုင်တွဲပြီး ပို့နိုင်ဖို့ Web Email Services တွေကနေ Attach လုပ်ဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ File Size Limit တွေကို သိထားဖို့ လိုလာတယ်။ ဥပမာ - Gmail နဲ့ Outlook က Email နဲ့ Files တွေ Attachment လုပ်မယ်ဆိုရင် ဖိုင်တစ်ခုကို အများဆုံး 25 MB အထိ ခွင့်ပြုထားတယ်။ (ဒါပေမယ့် အဲ့တာက နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နေတဲ့ သူတွေအတွက်လောက်ပဲ သေချာတာ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျွန်တော်တို့လို ဖုန်းကလာတဲ့ အင်တာနက်နဲ့ စာရေးစာဖတ် လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်က5MB လောက်တောင် Attach လုပ်ဖို့ မလွယ်ဘူး။)
တကယ်လို့ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ ဖိုင်က 25 MB ထက် ကျော်နေပြီ ဆိုပါစို့။ ဒီလိုဆို လုပ်လို့ရတဲ့ တစ်နည်းက HJ-Split လိုမျိုး File-Splitting Utility တစ်ခုခုသုံးပြီး အပိုင်းပိုင်းခွဲ၊ နောက်ပြီး ရလာတဲ့ အပိုင်းတွေကို Messages ပေါင်းများစွာ ဖန်တီး Attach လုပ်ပြီး လက်ခံမယ့်သူဆီပို့။ လက်ခံတဲ့သူက အဲ့ဖိုင်တွေကို တစ်ခုချင်းစီ ဒေါင်းလုပ်ချ။ နောက်ပြီး ပြန်ပေါင်း။ ဖတ်ရတာတောင် တော်တော် ခေါင်းရှုပ်စရာ ကောင်းတယ်။ အဲ့လိုအဆင့်များ အလုပ်ရှုပ်တဲ့ နည်းတွေ မသုံးချင်တော့ နောက်ပိုင်းမှာ Email နဲ့အတူ ဖိုင်ပို့ချင်တယ် ဆိုရင် ဒုတိယနည်း ဖြစ်တဲ့ Online Storage Services တွေ( ဥပမာ - Dropbox - Google Drive – OneDrive …) ကျွန်တော်တို့ သုံးလာကြတယ်။
သူတို့တွေကိုသုံးရင် ရလာမယ့် အားသာချက်က ဖိုင်တစ်ခု 25 MB ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက် ကျွန်တော်တို့ မေ့ထားလို့ရတယ်။ Microsoft OneDrive ဆိုရင် Limit အနေနဲ့ ဖိုင်တစ်ခုကို2GB အထိ Upload တင်ဖို့ ခွင့်ပြုတယ်။ သူနဲ့အပြိုင် Google Drive က ဖိုင်တစ်ခုကို 1 TB (1000 GB) ထိ ခွင့်ပြုတယ်။ အဲ့လောက်နဲ့မှ အဆင်မပြေပဲ ကိုယ် Upload တင်ချင်တဲ့ File Size က ပုံမှန်ထက်ကို ကြီးလွန်းနေတယ်ဆိုရင် File Size ကန့်သတ်ချက် လုံးဝမထားတဲ့ Dropbox ကို ကျွန်တော်တို့ သုံးလို့ရတယ်။
ဖော်ပြပြီးခဲ့တဲ့ Online Storage Services တွေက အလကားသုံးလို့ရတယ် ဆိုပေမယ့် သူတို့ကို သုံးချင်တယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့ Register လုပ်ရတယ်။ အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲ Register လုပ်စရာမလိုတဲ့ Online Storage Service ကိုမှ သုံးချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တွေ WeTransfer လို့ခေါ်တဲ့ Freemium Web App ကို သုံးလို့ရတယ်။ WeTransfer ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ဖိုင်ကို Browser ကနေတဆင့် File Size2GB အထိ Upload တင်နိုင်တယ်။ Register လည်း လုပ်စရာမလိုဘူး။ လိုတာဆိုလို့ ပို့သူနဲ့ လက်ခံမယ့်သူရဲ့ Email လိပ်စာ ထည့်ပေးရတာပဲရှိတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ် Upload တင်ထားတဲ့ဖိုင်ကို လက်ခံမယ့်သူက ချက်ချင်း Download မချဖြစ်ရင်တောင် အချိန်ရတဲ့အခါ Download ယူနိုင်ဖို့ (၇) ရက်ကြာတဲ့ထိ Server ပေါ်မှာ သိမ်းထားပေးတယ်။
အခုပြောခဲ့တဲ့ နည်းတွေထဲက Dropbox - Google Drive – OneDrive - WeTransfer စတဲ့ ဘယ် Online Storage Services ကိုပဲ သုံးသုံး သေချာတာက ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့သူဆီ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ ဖိုင်ရောက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး မဖြစ်မနေ Upload အရင်တင်တဲ့ အဆင့်ကို ဖြတ်သန်း ရမယ်။ အဲ့အဆင့်ပြီးတော့မှ ရလာတဲ့ Links ကို Share ပြန်လုပ်ပြီး တစ်ဖက်လူက ဒေါင်းလုပ် ပြန်ချရတယ်။ အဲ့တော့ အခက်ခဲဆုံး အဆင့်ဖြစ်တဲ့ Upload တင်တဲ့အဆင့်ကို Bypass လုပ်ပြီး ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ဖိုင်ကို တစ်ဖက်လူဆီရောက်အောင် လုပ်လို့ရတဲ့နည်း မရှိနိုင်ဘူးလား။ ရှိမယ် ဆိုရင် Upload တင်စရာမလိုတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် ပိုကောင်းတာပေါ့။
အဲ့အတွက် JustBeamIt ရှိတယ်။ သူက Peer-to-Peer App တစ်ခုပဲ။ တစ်ချိန်က ကျွန်တော်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ What is Torrent? ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ Peer-to-Peer နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖော်ပြခဲ့ဖူးတာရှိတယ်။ Peer-to-Peer ဆိုတာ အင်တာနက်ထဲမှာ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ဖိုင်ကို ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့သူဆီရောက်အောင် ဘယ်နေရာကိုမှ Upload တင်စရာ မလိုဘဲ ကွန်ပြူတာတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြား တိုက်ရိုက်ပို့တဲ့နည်းကို ခေါ်တာပါ။ JustBeamIt ကိုသွားပြီး ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ဖိုင်ကို Drag and Drop ဆွဲထည့်လိုက်ရင် ချက်ချင်း Link တစ်ခု ရလာလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ့ Link ကို Share လုပ်ပြီး တစ်ဖက်လူက Click ပေးလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာထဲက ပို့ချင်တဲ့ဖိုင်ကို တစ်ဖက်ကွန်ပြူတာကနေ တိုက်ရိုက် Download ဆွဲလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Infinit - သူကတော့ JustBeamIt နဲ့ သဘောတရားချင်း ဆင်ပြီး Web App မဟုတ်တဲ့ Desktop Application တစ်ခုပါ။ သူလည်းပဲ Peer-to-Peer နည်းကို သုံးတယ်။ သူ့ကို သုံးမယ်ဆိုရင် ပို့ချင်တဲ့ဖိုင်ကို Infinit app ထဲ Drag ဆွဲထည့်၊ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့သူ ကို Contacts ထဲကနေ ရွေးပြီး တစ်ဖက်လူက Incoming File Request ကို လက်ခံတာနဲ့ File Transfer လုပ်ငန်းစတယ်။ Infinit ရဲ့ နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ခုက Resumable Download ပေးထားတယ်။ ဆိုလိုတာ File Transfer လုပ်နေတုန်း Internet Connection ကျသွားတာမျိုး၊ မီးပျက်သွားတာမျိုး ဖြစ်ခဲ့ရင် တစ်ကနေပြန်စပြီး ပို့စရာမလိုပဲ ရောက်တဲ့ နေရာကနေ ဆက်ပို့နိုင်အောင် Application က လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ နောက်ပြီး Network တူတဲ့သူ အချင်းချင်း ကွန်ပြူတာတစ်လုံးကနေ နောက်တစ်လုံးကို ဖိုင်ပို့ချင်တဲ့အခါ Infinit ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် Local Area Network ကနေ သွားတာမို့လို့ File Transfer လုပ်တာ အရမ်းမြန်တယ်။ လိုအပ်တာတစ်ခုက Infinit ကိုသုံးပြီး Peer-to-Peer နည်းနဲ့ File Transfer လုပ်မယ်ဆိုရင် ပေးပို့သူနဲ့ လက်ခံမယ်သူနှစ်ဦးစလုံးရဲ့ စက်မှာ Infinit App သွင်းထားဖို့ လိုပါတယ်။
နောက်ဆုံးနည်းလမ်း တစ်ခုအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရင်းနှီးပြီးသား Skype App သုံးပြီး Documents, Photos, Videos နဲ့ တစ်ခြား ပမာဏကြီးတဲ့ဖိုင်တွေကို Internet ကနေတဆင့် ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ သူလည်း Peer-to-Peer နည်း သုံးထားလို့ File Size Limit ကန့်သတ်ချက် မရှိပါဘူး။ အခုဖော်ပြခဲ့သလောက်ဆို အင်တာနက်ထဲမှာ အလွယ်တကူ ဖိုင်ပို့ချင်တဲ့သူတွေ အတွက် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ဒီ Article က ကူညီပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
3:16 PM LeaveaComment Read More
How To Get Windows Experience Index In Windows 8.1
Windows Experience Index ဆိုတာ Windows Vista -7နဲ့ 8 သုံးသူတွေ အတွက် Windows တင်အပြီးမှာ ကိုယ့်စက်ရဲ့ System Performance ဘယ်လောက် ရှိသလဲ ဆိုတာ စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ ညွှန်းကိန်းကိုခေါ်ပါတယ်။ အလွယ်ပြောရင် Run လို့ ရလာတဲ့ Result ကို ကြည့်ပြီး Performance အတွက် ဘာတွေတိုးရမယ်၊ ဘာတွေချွေသုံးရမယ်၊ ဒီ Windows ကို ဆက်ပြီး သုံးသင့်သလား၊ မသုံးသင့်ဘူးလား ဆိုတာမျိုးတွေထိ ခန့်မှန်းဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
Windows Experience Index အကြောင်းကို အသေးထပ်စိတ်ပြီး ရှင်းရရင် သူက ကိုယ့်ကွန်ပြူတာထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Hardware တွေရဲ့ လက်ရှိ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်တွေကို တိုင်းတာ စစ်ဆေးပေးတဲ့ ညွှန်းကိန်းဖြစ်ပြီး Components ( ၅ ) မျိုးကို တိုင်းတာစစ်ဆေးပါတယ်။ အဲဒီ့ Components ( ၅ ) မျိုးကတော့ Processor - Memory ( RAM ) - Graphics - Gaming graphics - Primary hard disk တို့ ဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီကနေ သူ စစ်ဆေးလို့ ရလာတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေထဲက အငယ်ဆုံး ကိန်းဂဏန်းကို ယူပြီး Windows Experience Index Base Score ( ကွန်ပြူတာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ပြ အခြေခံညွှန်းကိန်း ) ကို ဖော်ပြပါတယ်။ ဒီဂဏန်းတွေ ဘာကို ရည်ညွှန်းသလဲ ဆိုရင် Subscore နိမ့်တာနဲ့ အမျှ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဟာ သိသိသာသာ နှေးကွေးလေးလံမယ် ဆိုတာ ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီး Subscore မြင့်တာ နဲ့ အမျှ ကွန်ပြူတာရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် မြန်ဆန်မြင့်မားမယ် ဆိုတာကို ဖော်ကျူးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ - လို့ တစ်ချိန်က Windows Experience Index (WEI) အကြောင်းရေးရင်းနဲ့ Windows Experience Index: An In-Depth Look ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းတာက End Users တိုင်းအတွက် အသုံးတည့်တဲ့ Windows Experience Index GUI version ဟာ Microsoft ကနေ နောက်ဆုံးထုတ်လိုက်တဲ့ Windows 8.1 OS မှာ ပါမလာတော့ဘူး။ WEI ဟာ အရင်က GUI version ဖြစ်တာကြောင့် အောက်မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း သုံးရလွယ်တယ်။ ထင်သာမြင်သာရှိတယ်။
တစ်ခုရှိတာ Windows 8.1 မှာ WEI GUI version ပါမလာတော့ပေမယ့် Command Prompt နဲ့ Windows Powershell ကိုသုံးပြီး Command Line ကနေတဆင့် ကြည့်လို့တော့ ရနိုင်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ခက်ခက်ခဲခဲတွေကို သိပ်စိတ်မဝင်စားတတ်တဲ့ သူတွေအတွက် WEI ကို Third-party tools တွေနဲ့ အရင် GUI version လိုပဲ သုံးလို့ရအောင် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြသွားမယ့် ခေါင်းစဉ်(၃)ခုက Windows 8.1 မှာ WEI ကို စစ်ဆေးကြည့်ချင်သူတွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်မယ့် Tools တွေပါ။
Metro Experience Index : Windows 8.1 ရဲ့ WEI ကို စစ်ဆေးဖို့ ပထမဆုံးထွက်လာတဲ့ Tool တစ်ခုပါ။ Windows 8.1 Preview ထွက်ပြီးမကြာခင် လပိုင်းလောက်မှာ ထုတ်ခဲ့ပြီး ခုချိန်ထိ Update ထပ်မပေးတော့ပေမယ့် သူက Windows 8.1 RTM တင်မှာသာမက Windows 8.1 Update 1 ထိပါ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ မရှိပဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာ သူက Portable မဟုတ်လို့ Install လုပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ChrisPC Win Experience Index : သူက ကျွန်တော်တို့ အရင်သုံးနေကျ Original Windows Experience Index နဲ့ ဆင်တဲ့ Interface ရှိပြီး WEI scores မှာ CPU, RAM, Graphics, Hard Disk ဆိုတဲ့ Components တွေရဲ့ Subscore တွေကို ဖော်ပြပေးပါတယ်။
Winaero WEI Tool : ကျွန်တော့်တစ်ယောက်တည်း သဘောအရပြောရရင်တော့ ဖော်ပြမယ့် Tools (၃) မျိုးမှာ Winaero WEI Tool ကို သဘောအကျဆုံးပါ။ သူလည်းပဲ ChrisPC လို WEI scores မှာ CPU, RAM, Graphics, Hard Disk ဆိုတဲ့ Components တွေရဲ့ Subscore တွေကို ဖော်ပြပေးတယ်။ အဲ့တာအပြင် နောက်ထပ်ပါဝင်သေးတဲ့ သူရဲ့ အားသာချက်တစ်ချို့က -
ရလာတဲ့ Index ကို Screenshot တစ်ခါတည်း ယူလို့ရတယ်။
ရလာတဲ့ ပုံကို PNG File အနေနဲ့ Save လုပ်ပြီး ImgUr ကို တစ်ခါတည်း Upload တင်လို့ရတယ်။
နောက်ပြီး WEI Table ကို HTML File အနေနဲ့ Save လုပ်လို့ပါရတယ်။
နောက်ဆုံး အားသာချက်ကတော့ Install လုပ်ဖို့မလိုဘူး Portable အနေနဲ့ သုံးလို့ရတယ်။
စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ WEI Tools (၃) ခုကို စမ်းသပ်သုံးစွဲကြည့်ပြီး နှစ်သက်ရာကို လိုအပ်နေသူတွေအတွက် လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
9:17 AM LeaveaComment Read More
“System Reserved” Partition ဆိုတာကို Service လိုက်ပြင်နေတဲ့သူ တော်တော်များများနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကွန်ပြူတာကလိဖူးသူတိုင်း ရံဖန်ရံခါ တွေ့ဖူးကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိတယ်။ အဲ့ဒီ့ Partition က Windows7နဲ့ 8 ကို Clean Disk မှာ Install လုပ်တဲ့အခါ Windows ကနေ အလိုလျောက် ဖန်တီးပေးတဲ့ Partition လို့ပဲ ပြောရမယ်။ အလိုလျောက် ဖန်တီးပေးတဲ့ Partition ဆိုပေမယ့် Windows ကနေပြီး အဲ့ဒီ့ Partition ကို Drive Letter သတ်မှတ်မပေးဘူး။ အဲ့တာကြောင့် တကယ်တမ်း Windows တက်လာတဲ့အခါ အဲ့ဒီ့ “System Reserved” Partition ဆိုတာကို Windows Explorer မှာ မြင်ရမှာ မဟုတ်သလို ပုံမှန် User တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရှိတယ်ဆိုတာကိုတောင် သတိထားမိမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ကို Disk Management သုံးလေ့ရှိတဲ့ သူတွေနဲ့ တစ်ခြား 3rd Party Partition Tools သုံးလေ့ရှိသူတွေလောက်ပဲ သတိထားမိကြလိမ့်မယ်။
“System Reserved” Partition ဆိုတာ Windows7နဲ့ နောက်ပိုင်း OS တွေမှာမှ Microsoft ကစပြီး မိတ်ဆက်ခဲ့တာမို့လို့ အရင် Windows အဟောင်းတွေမှာ တွေ့ဖူးကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီ့ Partition ကို Windows Serer 2008 R2 နဲ့ နောက်ပေါ်တဲ့ Windows Server versions အသစ်တွေမှာလည်း Create လုပ်လာတာ တွေ့ရတယ်။
အဲ့တော့ “System Reserved” Partition က ဘာအရေးကြီးသလဲဆိုတာ သိဖို့လိုလာသလို သူ့ကို ဘာအတွက် ဖန်တီးထားသလဲဆိုတာကိုလည်း နားလည်ထားဖို့ လိုလာတယ်။ “System Reserved” Partition ကို Windows ကနေ အလိုလျောက် ဖန်တီးရခြင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က (၂) ခုရှိတယ် -
Boot Manager နှင့် Boot Configuration Data များ သိမ်းဆည်းရန် - ကွန်ပြူတာ Boot တက်တဲ့အချိန်မှာ Windows Boot Manager စအလုပ်လုပ်ပြီး Boot Configuration Data (BCD) ထဲမှာရှိတဲ့ Boot Data ကို အရင်ဆုံး သွားဖတ်တယ်။ အဲ့လို “System Reserved” Partition ထဲက Boot Loader ကို Boot ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့် System Drive ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ Windows ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပြီး အဲ့ကနေမှတဆင့် Boot တက်တယ်။
BitLocker Drive Encryption အတွက် Startup Files များ အသုံးပြုနိုင်စေရန် - ကိုယ့် Hard Drive ကို လုံခြုံမှုရှိအောင် BitLocker Drive Encryption သုံးဖို့ စိတ်ကူးရှိမယ်ဆိုရင် “System Reserved” Partition ထဲမှာ ကွန်ပြူတာစတင်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေ (Boot Files) ရှိနေတာက Main Windows partition ထဲမှာ ရှိနေတာထက် ပိုကောင်းပါတယ်။ အဲ့လိုရှိနေခြင်းအားဖြင့် ကွန်ပြူတာ Boot တက်တဲ့အချိန်မှာ Unencrypted ဖြစ်နေတဲ့ System Reserved partition ကနေတဆင့် Main Encrypted Drive ကို Decrypt လုပ်ပြီး Encrypted Windows System ကို Boot စေပါတယ်။
အဲ့တာကြောင့် BitLocker Drive Encryption သုံးဖို့ စိတ်ကူးရှိမယ်ဆိုရင် “System Reserved” Partition ကို မဖြစ်မနေ ထားသင့်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ BitLocker သုံးတဲ့အချိန်မှာ ပုံမှန် Function ရဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အပေါ်မှာ ပြောထားခဲ့ပြီးသလို အရေးကြီးတဲ့ Boot Files တွေက Default အနေနဲ့ “System Reserved” Partition ထဲမှာ သိမ်းတယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ဘာသာ Partition ခွဲပြီး အဲ့ဖိုင်တွေကို Main Windows partition ထဲမှာပဲ သိမ်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်း သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
“System Reserved” Partition ကို Windows Installation လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် HD ကို Partition ပိုင်းတဲ့အချိန်မှာ Windows Setup က အလိုလျောက်ဖန်တီးပြီး Windows7မှာ “System Reserved” Partition က 100 MB နေရာယူပါတယ်။ Windows 8 မှာတော့ 350 MB နေရာယူပါတယ်။ Windows Installer ထဲမှာပါတဲ့ Partition Manager နဲ့ ကိုယ့် HD က Unallocated Space ကို Partition ပိုင်းဖို့ ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာ Windows Setup ကနေ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြောတာကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။
ဆိုလိုတာက Windows နဲ့အတူပါလာမယ့် Features တွေ ပုံမှန်အတိုင်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ System Files တွေသိမ်းဖို့ နောက်ထပ် Partition (“System Reserved” Partition ) ဖန်တီးရလိမ့်မယ် ဆိုတာကို အသိပေးတာပါ။
တစ်ချို့က ဒါကို သဘောမကျကြဘူး။ Partition တစ်ခုခွဲတာ နှစ်ခုထွက်တယ်ဆိုပြီး အလိုမကျတဲ့သူတွေရှိသလို ဘာမှလည်း သုံးစားရတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ “System Reserved” Partition က ဘာအတွက် ပေါ်လာတာလဲဆိုပြီး မေးကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်း သဘောအရဆိုရင်တော့ ပမာဏအရ ဘယ်လောက်မှ မရှိတဲ့ ဒီ Partition သေးသေးလေးကို များများစားစားတွေးမနေဘဲ ရှိမြဲအတိုင်း ထားစေချင်ပါတယ်။ သူရှိနေလို့ ကျွန်တော်တို့အတွက် ထူးပြီး ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ Windows ကနေလည်း ဒီ Partition ကို မမြင်ရအောင် Default အနေနဲ့ Drive Letter မပေးဘဲ Hide ထားပေးတယ်။ အဲ့တာကြောင့် လူတော်တော်များများ ဒီ Partition ကို ရှိမှန်းတောင် သတိမထားမိကြဘူး။ ဒီ Partition က BitLocker မသုံးသူတွေအတွက် မရှိလည်း ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် လက်ရှိမှာ BitLocker သုံးနေသူတွေ၊ နောင်များမှာ BitLocker သုံးဖို့ စိတ်ကူးရှိသူတွေအားလုံးအတွက် မဖြစ်မနေ ထားသင့်ပါတယ်။ အဲ့လိုရှိထားမှသာ Drive အားလုံးအတွက် BitLocker သုံးဖို့ အသင့်အနေအထား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ “System Reserved” Partition ကို နေရာမပေးချင်ဘူးဆိုရင် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နည်းတွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့နည်းတွေထဲက တစ်နည်းကတော့ Unallocated Space ကို Partition ပိုင်းတဲ့အချိန်မှာ Windows Installer နဲ့ မပိုင်းဘဲ တစ်ခြား Disk Partitioning Tool တစ်ခုခုသုံးပြီး ကြိုပိုင်းထားတဲ့နည်းပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့လိုလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးရှိရင် Paragon Hard Disk Manager ဒါမဟုတ် Partition Wizard Boot Disk အခွေကို သုံးပါတယ်။ အဲ့နည်းနဲ့ Partition ပိုင်းထားပြီးနောက်မှ Windows Installer ကို ကိုယ် Windows ထားချင်တဲ့ Partition နေရာပြလိုက်ရင် “System Reserved” Partition ကို Create မလုပ်တော့ဘဲ ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လိုနည်းနဲ့ “System Reserved” Partition မှာ သိမ်းမယ့် Boot Files တွေကို Main System Partition မှာ တစ်ပါတည်း ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဒီနည်းကိုပဲ တစ်ခြား Disk Partitioning Tool တွေမသုံးဘဲ Windows Installer ထဲမှာပါတဲ့ Partition Manager ကိုသုံးပြီး “System Reserved” Partition မပါအောင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖန်တီးနိုင်ပါသေးတယ် -
Windows Setup မလုပ်ဆောင်သေးခင်မှာ Shift+F10 ကို နှိပ်ပြီး Command Prompt ကိုဖွင့်ပါ။
Command Prompt window ပွင့်လာရင် diskpart လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
ပြီးရင် Unallocated Space ကို Diskpart Tool သုံးပြီး New Partition အဖြစ် Create လုပ်ပါ။ ဥပမာ - ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာမှာ Partition တစ်ခုမှ မရှိဘဲ Empty ဖြစ်နေတဲ့ Drive တစ်ခုပဲ ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ဒီလိုဆိုရင် select disk0လို့ရိုက်ပြီး create partition primary အနေနဲ့ ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းက Partition ပိုင်းချင်သူ အားလုံးအတွက် Ideal Solution တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Diskpart Tool အသုံးပြုပုံ အသေးစိတ်ကို ဒီနေရာမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Partition Create လုပ်ပြီးသွားရင် Windows Setup ကို ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါ။
ဖော်ပြခဲ့တဲ့ နည်းတွေကိုမသိပဲ Windows တင်ပြီးခါမှ “System Reserved” Partition ကို ဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဖျက်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန် သမားရိုးကျ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ Partition ကို Delete လုပ်လို့တော့ မရပါဘူး။ အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင် “System Reserved” Partition ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Boot Loader Files တွေကိုပါ Delete လုပ်မိသလိုဖြစ်ပြီး Windows မတက်တော့တဲ့ ပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။
“System Reserved” Partition ကို ဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး အဲ့ဒီ့ Partition ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Boot Files တွေကို System Partition ထဲ ရွှေ့ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းက အပြောလွယ်ပေပြီး အလုပ်ခက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့နည်းကို သုံးရင် Registry ကိုင်ရမယ်၊ Files အတော်များများကို Drive to Drive ရွှေ့ရမယ်၊ BCD ကို ပြန်ပြင်ရေးရမယ် နောက်ဆုံး Main System Drive ကို Active Partition ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်ရဦးမယ်။ အသေးစိတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုတော့ အင်တာနက်ထဲမှာ နေရာတိုင်းလိုလို တွေ့နိုင်တာကြောင့် အသေးစိတ်ပြန်မရေးတော့ဘူး။ ဘယ်လောက်မှ မရှိတဲ့ ပမာဏလေးတစ်ခုလောက် အတွက်နဲ့ “System Reserved” Partition ကို ဖျက်ဖို့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အားမပေးဘူး။
“System Reserved” Partition က ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် Partition Table မှာ ရှုပ်ထွေးစေသလို မြင်ရပြီး နေရာအများကြီး ယူထားသလို ထင်ရပေမယ့် သူက Windows တစ်ခုလုံးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုတာရယ် သူ့ကိုဖျက်လိုက်လို့ ကိုယ့်အတွက် Space ဘယ်လောက်မှ ပိုရလာမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာရယ်ကို စာဖတ်သူတွေ သတိထားနိုင်ဖို့ အသိပေးချင်ပါတယ်။
7:06 PM LeaveaComment Read More